Hirgelinta Sharerecada yaa ka mas’uul ah? – Radio Muqdisho
Dadka Soomaaliyeed waxa ay Islaamka qaateen wax ka badan kun sano ka hor, waxayna jecelyihiin ku dhaqanka Islaamka iyo u hoggaansanka waxa uu farayo.
Dustuurka dalkeenna ayaa si cad u qeexaya in Islaamku yahay diinta kaliya ee dalka, wax kasta oo ka hor imaanayana ay baadil yihiin.
Baarlamaanka dalku waxa uu si aan loo kala harin ugu codeeyay hir gelinta shareecada Islaamka. Sidaas oo ay tahay kooxaha xag jirka ah ee magaca diinta ku qaraabta waxay diideen arrintaas , waxayna dagaal kula jiraan dowladda iyo shacakba Soomaaliyeed iyagoo ku doodaya inay shareecada hir gelinayaan.
Haddaba Hirgelinta shareecada yaa ka mas’uul ah? Ma dowladda mise kooxaha argagixisada ah ee banneystay dhiigga muslimiinta? Habkee ayaase loo marayaa ku dhaqanka Islaamka?
Waa mowduuca toddobaadkan uu ku saabsan yahay barnaamijkeenna Tubta Toosan oo uu marti noogu yahay Sheikh Cabdullaahi Axmed Garruun.